चार वाणिज्य बैंकको वित्तीय विवरण सार्वजनिक ! - itaharinews
चार वाणिज्य बैंकको वित्तीय विवरण सार्वजनिक !
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १३, २०७६ समय: १६:४७:२८
काठमाडौं । अहिलेसम्म ४ वाणिज्य बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । तीमध्ये दुई वाणिज्य बैंकले नाफा बढाएका छन् भने दुईको नाफा घटेका छ । अहिलेसम्म एनआइसी एशिया, सानिमा, सिद्धार्थ र सिटिजन्स बैंकले मात्रै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
एनआइसी एशिया र सानिमा बैंकको नाफा वृद्धि भएको छ । एनआइसी एशिया बैंकले पुस महिनासम्म २ अर्ब १ करोड ६२ लाख खुद नाफा गरेको छ । उक्त बैंकले खुद नाफा ३३।३९ प्रतिशतले बढाएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले १ अर्ब ५१ करोठ १४ लाख खुद नाफा गरेको थियो ।
सानिमा बैंकले पनि गत वर्ष भन्दा १६।८३ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ । उक्त बैंकले पुससम्म १ अर्ब १४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकाले ९८ करोड २० लाख ८६ हजार खुद नाफा गरेको थियो।
अहिलेसम्म वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका सिद्धार्थ र सिटिजन्स बैंकले नाफा घटाएका छन् । सिद्धार्थ बैंकको नाफा ४.०१ प्रतिशतले घटेको छ । उक्त बैंकले पुससम्म १ अर्ब २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा सिद्धार्थ बैंकले १ अर्ब ६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो।
यसैगरी, सिटिजन्स बैंकले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा ६८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । उक्त बैंकले गत वर्षको सोही अवधिमा ७७ करोड ३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । गत वर्ष भन्दा सिटिजन्स बैंकको नाफा १०।७२ प्रतिशतले कमी हो ।
२७ वाणिज्य बैंकमध्ये ४ वटाले मात्र अहिलेसम्म वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । बाँकी २३ वाणिज्य बैंकले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । निक्षेप संकलन र त्यही अनुसारको कर्जा लगानी गरेका कारण बैंकको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न वाँकी बैंकले नाफा बृद्धि गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
विधुत् ग्राहकलाई कोरोना छुट, १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई २० प्रतिशत मिनाहा !
काठमाडौँ – नेपाल विधुत् प्राधिकरणले प्रति महिना एक सय ५० युनिटसम्म खपत गर्ने घरेलु ग्राहकलाई २० प्रतिशत मिनाहा गर्ने भएक...
अर्थमन्त्री हट्ने हल्ला फिजाएर यसरी डुबाइदैछ साना लगानीकर्ता !
काठमाडौं– अर्को सातादेखि अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाको राष्ट्रियसभाको कार्यकाल सकिँदैछ र यसपछि उनले निरन्तरता पाउँदैनन...
सामसुङले ल्यायो एक्सचेन्ज सुविधा !
काठमाडौँ /सामसुङ मोबाइलका लागि आधिकारिक बिक्रेता आईएमएसले आफ्ना अधिकांश आईएमएस स्मार्ट शोरुमहरुमा सामसुङ एक्सचेन्ज सुविध...
मेची क्राउन सञ्चालनको तयारी !
विर्तामोड । झापाको मेचीनगरमा डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको पाँचतारे होटल मेची क्राउन आगामी वैशाखदेखि सञ्चालनमा आ...